Ny fiampangana sekretera jeneraly UNWTO no mahatonga azy ho mpitsara sy mpitsara
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Ny fiampangana sekretera jeneraly UNWTO no mahatonga azy ho mpitsara sy mpitsara
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Aogositra 29, 2021
Zurab Pololikashvili, sekretera jeneralin'ny UNWTO
Ny mpikambana ao amin'ny UNWTO dia ahitana mpikambana miisa 159, mpikambana miaramiasa 6 ary mpikambana maherin'ny 500 izay misolo tena ny sehatra tsy miankina, andrim-panabeazana, fikambanana fizahan-tany ary manampahefana misahana ny fizahan-tany eo an-toerana.
Ny tompon'andraikitra dia ny sekretera jeneraly Zurab Pololikashvili. Politisiana sy diplomaty Zeorziana izy, mahay sy zatra amin'ny fanodinkodinana politika. Ity lahatsoratra ity dia hampiseho fa tsy hanana tahotra izy raha manapa-kevitra ny hitantana ity maso ivoho mikambana UN toy ny orinasa mpanao heloka bevava.
Ireo masoivohon'ny ONU dia fikambanana iraisam-pirenena mizaka tena miasa miaraka amin'ny firenena Mikambana.
Ny rehetra dia nifandray tamina Firenena Mikambana tamin'ny alàlan'ny fifanarahana nifampiraharahana.
Nisy ny sasany talohan'ny Ady Lehibe Voalohany. Ny sasany dia nifandray tamin'ny Fikambanam-pirenena. Ny sasany kosa noforonina saika niaraka tamin'ny ONU. Ny hafa kosa noforonin'ny UN mba hanomezana fahafaham-po ireo filàna vao misondrotra ary toa ny filan'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO.
Sahirana izao tontolo izao, manokana, ny tontolon'ny fizahan-tany manerantany dia simban'ny COVID-19. Ny fitarihana mahomby ao amin'ny World Tourism Organization, ny fiaraha-miasa eo amin'ny UNWTO sy ny WTTC no zava-dehibe, saingy tsy mbola nisy izany. Zurab Pololikasvili dia lasa Sekretera jeneraly tamin'ny 1 Janoary 2018.
Mampalahelo fa ilay lehilahy tokana niandraikitra ny UNWTO, sekretera jeneraly Zurab Pololikashvili dia nahavita nilalao ny karany. Ny olana tokana dia ny fanodikodinana andraikitra, ny hosoka amin'ny fifidianana mety ho izy, ary izy izao no miandraikitra ny fihainoana sy ny fanapaha-kevitra momba izay fitarainana atao aminy.
Ny ampahany mampalahelo fotsiny dia, fa ny ankamaroan'ny firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO dia manana adidy ara-politika ary tsy hikasika an'io olana io. Ny firenen-kafa dia tsy mahatakatra izany tsotra izao, vitsy ny mety tsy miraharaha izany.
Andriamatoa Zurab Pololikasvili dia azo inoana fa tsy sekretera jeneraly Zurab Pololikasvili androany, raha toa ka natao araka ny hitsiny sy ny lalàna ny fifidianana.
Nanjary mazava ny fanitsakitsahana ny lalàna tamin'ny fivorian'ny filankevitra mpanatanteraka 2017 tany Madrid, ary tao amin'ny General Assembly tany Chengdu ihany tamin'ny taona 2018, mamela Zurab Pololikasvili no voafidy voalohany ary nanamafy ny faharoa. Mety ho heloka bevava tonga lafatra izany.
Inona no nitranga?
Ny hetsika fanapaha-kevitra dia niseho tamin'ny mazava antoandro, raha ny sekretera jeneraly teo aloha, Dr. Taleb Rifai, no niniana nampahalalana tamin'ny mpanolotsaina azy ara-dalàna izay nahazo fisondrotana lehibe avy amin'ny sekretera jeneraly ankehitriny. Zurab Pololikasvili.
Taorian'ny 3 taona eTurboNews farany nahazo fanadihadiana ara-dalàna ny fizotrany ary mikasa ny hamoaka azy amin'ity herinandro ity.
Ireo firenena dia nandefa saram-pandraharahana ho an'ny UNWTO any Madrid. Nandefa izany tany amin'ny fikambanana iray tantanin'olona iray izy ireo ary maro no milaza fa mihazakazaka ho tombontsoany manokana, Zurab Pololikasvili. Zurab Pololikasvili tanjona farany mety ho tonga praiminisitra Zeorzia.
Zurab Pololikasvili no olona iray izay tsy mijery fotsiny ny masoivohon'ny Firenena Mikambana fa izy koa no olona manana ny fanapaha-kevitra farany momba ny olana sy ny fitarainana rehetra. Izy no mpitsara sy mpitsara ao amin'ny UNWTO. Ny komity mpanara-maso ny Firenena Mikambana dia tsy tompon'andraikitra amin'ny UNWTO.
Inona no dikan'izany?
Na dia azo apetraka aza ny olan'ny hosoka amin'ny fifidianana 2017/18 dia tsy misy vokany ireo voampanga amin'izao fotoana izao.
Ny hany vokany dia ny handavanan'ny UNWTO General Assembly amin'ity taona ity ny fanamafisana ny Zurab Pololikasvili amin'ny fe-potoan'ny sekretera jeneraly manomboka amin'ny 2022.
Tsy fantatra mazava hoe rahoviana ary aiza no hanaovana an'io Fivoriambe io. Ny GA nomanina ho an'ny volana Oktobra tany Maraoka dia nanjary lavitra hatrany.
Ity angamba no drafitra iray manontolo. Miaraka amin'ny firenena afrikana mpikambana marobe, mety tsy afaka mandefa minisitra any Madrid izy ireo, raha niverina tany amin'ny toerana misy ny foiben-toeran'ny UNWTO ny fanamafisana. Ho mora kokoa ny fanamafisana raha firenena vitsy no manatrika fivoriambe.
Iray volana mahery kely monja any amin'ny fivorian'ny General Morocco, ary tsy misy na inona na inona kasaina na ambara. Mety ho drafitry ny drafitra mandroso Zurab Pololikasvili izany.
Inona no hatao rehefa misy olana amin'ny masoivohon'ny Firenena Mikambana?
Ny biraon'ny Firenena Mikambana misahana ny asa fanaraha-maso anatiny dia birao mahaleo tena ao amin'ny Sekretariat an'ny Firenena Mikambana izay manana ny andraikiny dia ny "manampy ny sekretera jeneraly amin'ny fanatanterahana ny andraikiny amin'ny fanaraha-maso anatiny momba ny harena sy ny mpiasa ao amin'ny Organisation.
Ity masoivoho ity dia tsy manana fahefana amin'ny maso ivoho mikambana ao amin'ny ONU, anisan'izany ny World Tourism Organization (UNWTO)
Inona ny maso ivoho mikambana toa ny UNWTO?
Ny rafitry ny Firenena Mikambana dia misy ny Sekretariat lehibe ary misahana ny vola sy ny programa ary ny masoivoho manokana.
Ohatra, ny vola sy ny programa dia ao ny United Nations Children's Fund sy ny United Nations Development Program, izay manana birao mpanatanteraka sy lohany mpanatanteraka kanefa eo ambany fahefan'ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana. Mifanohitra amin'izany kosa, ireo masoivoho manampahaizana manokana, toy ny Organisialy misakafo sy fambolena, ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany (UNWTO) dia manana ny filan-kevi-pitantanana sy ny mpanatanteraka ary tsy eo ambanin'ny fahefan'ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana.
Ireo masoivoho, izay fikambanana iraisam-pirenena tsy miankina ara-dalàna manana ny lalàny, ny mpikambana ao aminy, ny taova, ary ny loharanon-karena ara-bola, dia nifandray tamin'ny Firenena Mikambana tamin'ny alàlan'ny fifanarahana nifampiraharahana.
The Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany dia masoivohon'ny Firenena Mikambana tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany tompon'andraikitra, maharitra ary azo eken'ny rehetra
Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO no lohan'ity masoivohom-pirenen'i Firenena mikambana tsy miankina ity. Ny dikan'izany:
Fitarainana momba ny fanodikodinana, kolikoly ary fisolokiana amin'ny Fifidianana sekretera UNWTO amin'ny taona 2017/18 no fanapahan-kevitry ny voampanga.
Ny fanapaha-kevitra sy ny fizahan-tavan'olona ao amin'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO 2021 tamin'ny taona 2021 dia ho fanapahan-kevitry ny voampanga.
Mampalahelo fa tsy hijerena fitarainana toy izany ny ONU. Ao amin'ny Family UN, mahaleo tena ny Agencies manokana, tsy misy ambaratongam-pahefana. Ny Firenena Mikambana dia tsy manana fahefana amin'ireo andrim-panjakana hafa.
Ny Joint Inspection Unit, izay vatana iraisan'ny rafitra UN dia afaka mijery izany. Mety tsy ho voarohirohy amin'ity vatana ity, mitory any amin'ny UNWTO izy tenany, fa tsy amin'ny olon-kafa.
Araho hatrany ireo tatitra atsy ho atsy eTurboNews momba an'ity olana ity.
Mitsidika miaraka amin'ny ...
Oktobra 20, 2021 ao amin'ny 13: 30
Mary Tomita hoy:
30 Aogositra 2021 amin'ny 05:45
Azafady esory aho azafady.